भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई डा. केसीको खुला पत्र – Health Post Nepal
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई डा. केसीको खुला पत्र
२०७६ कार्तिक २६ गते १८:१४
डा. केसीलाई निदाउनसमेत सकस, आइसियू अनिवार्य भए पनि जान इन्कार
किन घुर्छ मान्छे?
विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त नगर्न डा. केसीको आग्रह
डा. केसीलाई अनशन फिर्ता लिन सरकारको अनुरोध
सन् २००१ को भुकम्पपछि मैले यहाँको गृहराज्य गुजरातको भुजमा घाइतेहरुको सेवा गर्ने मौका पाएको थिएँ । त्यस्तै सन् २०१३ मा उत्तराखण्डमा भीषण बाढी आउँदा केदारनाथमा फसेका तीर्थयात्रीको सेवा गर्ने मौका पनि मैले पाएको थिएँ । त्यस क्रममा मेरो आफ्नै ज्यान मुस्किलले बचेको थियो । जुनसुकै देश र राष्ट्रियताका मानिस भए पनि उनीहरुको पीडा एकै किसिमको हुन्छ र मानवीय सेवा गर्दा मिल्ने सन्तुष्टि पनि एउटै हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।
त्यसैले यस्ता साझा समस्यासित भारत र नेपाल मात्रै नभई सबै दक्षिण एसियाली देशहरु मिलेर लड्नु जरुरी छ । त्यसका लागि नेपालसित हाल देखिएको सीमा समस्यालाई सरकारका विभिन्न स्तरमा हुने कुटनीतिक छलफलबाट समाधान गरी परस्पर विश्वास र मैत्रीको वातावरण कायम गर्न विशेष आग्रह गर्दछु।
आजदेखि क्यूआर कोड सहितको विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र पाउन सकिने, कसरी लिने सेवा ?